Gọọmenti E-ahịa (GeM) | Motadata - Motadata
Chọta anyị ugbu a
Kedu ihe bụ GeM?
Azụ ahịa Govt India ebe dị iche iche Dept, Organisation, PSU nke gọọmentị India nwere ike zụta ngwaahịa na ọrụ achọrọ. GeM na-achọ ịkwalite nghọta, arụmọrụ, na ọsọ n'ịzụta ọha. Ọ na-enye ngwá ọrụ nke e-bidding, reverse e-auction na ịchọ mkpokọta iji kwado ndị ọrụ gọọmentị, nweta uru kacha mma maka ego ha.
Dabere na ndụmọdụ nke otu ndị odeakwụkwọ nyere Prime Minister Honorable, Gọọmenti kpebiri na GeM SPV ga-emepụta ebe e-MarketGọment na-akwụsị otu (GeM) iji kwado ịzụ ahịa n'ịntanetị nke ngwa ahịa na ọrụ nkịtị chọrọ site na ngalaba gọọmentị dị iche iche. / Ụlọ ọrụ / PSU. Ọ bụ ọnụ ụzọ ịzụ ahịa e-n'ịntanetị maka ndị ọrụ Gọọmenti iji kwado usoro na-enweghị nkebi, hazie nkọwapụta na ụzọ nyocha zuru ezu. Ọ na-arụ ọrụ n'ahịa ahịa chọrọ n'ozuzu ụlọ ọrụ gọọmentị niile.
Nkọwapụta nke E-Market nke Gọọmentị
Nghọta: GeM ruo n'ókè dị ukwuu na-ebelata ntinye aka mmadụ na usoro ịzụ ahịa nke gụnyere ndebanye aha onye na-ere ahịa / onye na-azụ ahịa, ntinye iwu, na usoro ịkwụ ụgwọ. Nchịkọta dabere na ahịa na ịchịkọta ngwaahịa na ọrụ, arụ ọrụ ọtụtụ ụgbọ ibu, yana amụma nloghachi dị mfe na-eme ka ọ dị mfe ịzụrụ ihe. Dashboards enyi na enyi onye ọrụ na-enye nghọta achọrọ n'ime ịzụrụ & nleba anya akụrụngwa yana ijikwa ịkwụ ụgwọ. GeM na-arụ ọrụ dị ka ikpo okwu mepere emepe maka ụdị ndị na-ere ahịa niile ka ha na gọọmentị na-azụ ahịa ngwa ngwa n'enweghị ụdị mgbochi ọ bụla.
arụmọrụ: Enwere ike ịzụta ịzụrụ ihe ozugbo na GeM n'ime nkeji ole na ole ma usoro ahụ dum dị na ntanetị, njedebe na-ejikọta ya na ngwaọrụ ntanetị maka ọnụahịa ezi uche na ntule ndị na-ere ahịa. Maka ịzụ ahịa nke uru dị elu, ụlọ ọrụ nkwuputa/RA na GeM so na nke kacha pụta ìhè na ịrụ ọrụ nke ọma. Igwe nchọta siri ike na-enye ohere maka nchọgharị dị mfe site na ndepụta ngwaahịa na ọrụ bara ụba dị na portal. GeM bidding/RA na-eme ka asọmpi, egwuregwu ziri ezi, ọsọ, arụmọrụ, na-eduga na nchọpụta ọnụahịa kwesịrị ekwesị. Enwere ike ịkwado ezi uche nke ọnụego ahụ site na ntụnyere n'ịntanetị na ọnụahịa ahịa na ọnụ ụzọ e-azụmahịa na-eduga.
Nọ ná Ntụkwasị Obi na Nchekwa: GeM bụ ikpo okwu echekwara kpamkpam na akwụkwọ niile dị na GeM bụ ndị na-azụ ahịa na ndị na-ere ahịa bịanyere aka n'akwụkwọ e-nyere n'ọkwa dị iche iche. A na-enyocha ihe mmalite nke ndị na-ebubata ya na ntanetị yana na-akpaghị aka site na ọdụ data MCA21, Aadhar na PAN. Iji mee ka nleba anya nke ọma gbasara izi ezi nke ndị na-ebubata ya ike, ewebatala ọkwa kredit nke gbadoro ụkwụ na nyocha arụmọrụ gara aga yana oke ego nke ndị na-ebubata ya.
Mee Nkwado India: Na GeM, ihe nzacha maka ịhọrọ ngwa ahịa ndị na-anabata ahịa ahịa ahịa (PMA) yana nke ndị obere ụlọ ọrụ Scale rụpụtara (SSI), na-enyere ndị na-azụ ahịa gọọmentị aka ịzụta ngwaahịa Make na India na SSI ngwa ngwa.
Ikwu oke maka Gọọmentị: Nghọta, arụmọrụ, na ịdị mfe nke ojiji nke ọnụ ụzọ GeM ebutela mbelata ọnụ ahịa dị na GeM, ma e jiri ya tụnyere nro, nkwekọrịta ọnụego, na ọnụego ịzụrụ ozugbo.
Atụmatụ ndị a na-arụ ọrụ dị ka nnukwu ndị ọkwọ ụgbọ ala iji kwado ịzụ ahịa na GeM (Government e-Market) karịa site na nyiwe omenala ndị ọzọ.
Motadata kwuputara ihe diri ya IT Ops Ngwaahịa Suite na ọnụ ụzọ ịzụ ahịa n'ịntanetị nke gọọmentị India, Gọọmenti e-Marketplace (GeM) n'okpuru ngalaba “Information Technology Broadcasting and Telecommunication>> Software>>System Management Software>>Enterprise Management System Software (Q3 Category) ”, categorized dị ka “> Motadata Enterprise Ngwaahịa Management System Software.
Anyị na-achọ mgbe niile ikpo okwu nke na-eme ka ngwaahịa anyị na ngwọta dị na ngalaba gọọmentị dị iche iche ozugbo. GeM na-enye anyị ohere dị ukwuu dịka anyị chọrọ. Ikpo okwu a na-apụta ìhè na kpọmkwem n'inye ohere ịnweta ngwanrọ anyị maka ngalaba gọọmentị niile.
N'oge na-adịbeghị anya, anyị ewebata ngwaahịa abụọ AI na-enyere aka n'ahịa - AIOps, na ServiceOps.
Ikpokoro AIOps anyị na-enye ike dị mkpa nke ndị otu IT chọrọ iji dozie nsogbu IT dị mgbagwoju anya, metụtara arụmọrụ, ikike na nhazi, tupu ha enwee mmetụta ọjọọ na azụmahịa ahụ. Ikpo okwu nwere ụdị AI/ML dị n'okpuru nke enwere ike iji hazie data buru ibu iji chọpụta ihe adịghị mma, mee ka ndị ọrụ mara ozugbo ma mee ihe mgbochi.
Ikpokoro ServiceOps anyị bụ ngwa ITIL na-akwado ITIL jikọtara ọnụ nke gụnyere PinkVERIFY Certified Service Desk, Asset Manager, and Patch Manager ma na-eji AI / ML ebuli ma kwalite nnyefe ọrụ n'ofe usoro azụmahịa dị iche iche na-enweghị mkpa ngwaọrụ ndị ọzọ.
Ịzụta site na GeM site n'aka ndị ọrụ Gọọmenti nyere ikike ma mee ka ọ bụrụ iwu nke Ministry of Finance site n'ịgbakwụnye Iwu ọhụrụ nke 149 na General Financial Rules, 2017. Ruo ugbu a, steeti 17 abanyela aka na MoU ka ọ bụrụ akụkụ nke GeM. .